Okuluhlaza izixhobo esetyenziswa yinkampani zonke zivela kwizityalo ezaziwayo zepetrochemical ekhaya nakwamanye amazwe, ezinje ngeBorouge, Sabic, SK, LG, Basell, Sinopec, Petrochina njalo njalo. Ezingenabungozi kunye nokusingqongileyo, kwaye zithembisa ukungafaki inkunkuma erisayikilishekileyo. Emva kokungena kumzi-mveliso, zonke izinto ezingafunekiyo kufuneka zidlule kuthotho lweemvavanyo ezingqongqo nezenzululwazi ngaphambi kokuba zibekwe kwimveliso. Ukuqinisekisa umgangatho ophezulu kunye nokucoceka komthombo wemveliso, wabeka isiseko somgangatho ophezulu.
Inkqubo yokuTyisa okuphakathi
Inkqubo yokondla esembindini yamkela umatshini omnye kunye netyhubhu enye, kwaye indlela yoyilo yelogo etywiniweyo iqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo kwenkqubo yonke, kwaye akukho kubuya kweplastiki okanye kuthintelwe kwenzeka. Isetyenziswa ngokudibeneyo nesomisi (i-dehumidifier) ​​inkqubo yokuvumela umoya owomileyo ukuba womise izinto kwakhona ukukhusela ukufuma kwakhona kweplastikhi eyomileyo. Kwangelo xesha, umbhobho wokuhambisa uyacocwa emva komjikelo wokuhambisa ngamnye ukuqinisekisa ukuba akukho nto ishiyekileyo kumbhobho. Ngelixa kuthintelwa ukuphinda kuvele izinto zokwenza imveliso, ikwaqinisekisa ukungqinelana kwezinto zokwenza imveliso zongezwe kwizixhobo. Ngaphantsi kwentshukumo yoxinzelelo olungelulo lwe-vacuum, uthuli lwantlandlolo kwizinto zokwenza izinto luhluziwe ngenkqubo yokucoca ulwelo (umqokeleli wothuli), oluncedo ukwandisa imveliso.
Umbhobho ovela kwelinye ilizwe waseJamani
Umatshini ziphene Haitian
Inkampani ineeseti ezili-100 ze-extrusion kunye neeseti ezingama-200 izixhobo zokubumba inaliti, kubandakanya nezixhobo ezingama-23 zeBattenfeld (eJamani), izixhobo zolawulo lweemitha ezikwi-On-line kunye nenkqubo yokufumana izixhobo ze-ultrasonic ezikwi-intanethi ikakhulu ziphucula uzinzo lomgangatho wemveliso kunye nokuhlolwa kwe-intanethi kwimilinganiselo yemveliso.
Inkampani ixhotywe ngezixhobo zokuvavanya kwaye inelebhu yenqanaba lesizwe ukulawula umgangatho wezinto ezisetyenzisiweyo kunye neemveliso ezigqityiweyo.
Abasebenzi beziko lobugcisa ...
Ukunyibilika kokuhamba kwezinga lokuvavanya ...
Umvavanyi wokusasazeka weCarbon ...
Uvavanyo lomxholo we-Ash ...
Ubunzima begradiometer ...
Umatshini wovavanyo lwe-Hydrostatic ...
Inkampani yethu ifumene izatifikethi ezininzi ezinegunya